Inona no atao hoe AirDrop ary ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'izany | iPhone News
Inona no atao hoe AirDrop ary ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'izany
Ignatius Room | | Apple products, Fampianarana sy torolàlana
Raha vao namoaka iPhone na iPad vaovao ianao dia mety nanontany tena inona no atao hoe rano mitete. Azo inoana koa fa vao avy nahita an'io fampiasa io amin'ny iPhone, iPad na Mac ianao.
2 Fitaovana mifanentana amin'ny AirDrop
3 Aiza no misy rakitra zaraina amin'ny AirDrop
4 Inona no karazana rakitra azo alefa amin'ny AirDrop
5 Ahoana ny fametrahana AirDrop amin'ny iPhone
6 Ahoana ny fametrahana AirDrop amin'ny Mac
7 Alternatives amin'ny AirDrop ho an'ny Windows
AirDrop dia protocole fifandraisana an'ny Apple izay ahafahan'ny fitaovana rehetra tantanin'ny iOS, iPadOS ary macOS mifampizara karazana rakitra rehetra tsy mila mampiasa connexion internet raha mbola eo akaiky eo.
Ny protocol AirDrop mampiasa Wi-Fi sy Bluetooth fifandraisana fitaovana, noho izany dia mila velomina izy roa raha te hizara votoaty amin'ny alàlan'ny AirDrop.
Ny orinasa Cupertino dia nanambara ity teknolojia ity tamin'ny 2011, na izany aza, dia tsy voafetra amin'ny fitaovana navoakan'i Apple hatramin'io daty io, satria misy ihany koa amin'ny fitaovana tranainy, toy ny MacBooks nanomboka tamin'ny 2008.
Apple dia mamela antsika hanitsy ny AirDrop amin'ny mametra ny isan'ny olona manodidina antsika izay afaka mandefa rakitra ho antsika: ny olona rehetra, ny mpifandray ihany na ny kilemaina.
Fitaovana mifanentana amin'ny AirDrop
AirDrop dia misy amin'ny iOS 7 amin'ireto fitaovana manaraka ireto, fa ho an'ny mizara votoaty amin'ny fitaovana iOS hafa:
iPhone 5 na aoriana
iPad taranaka faha-4 sy aoriana
iPad Pro taranaka voalohany sy aoriana
iPad Mini taranaka voalohany sy aoriana
iPod Touch taranaka faha-5 sy aoriana
Ny protocol AirDrop dia misy amin'ny mizara rakitra eo amin'ny Mac Manomboka amin'ny OS X 7.0 Lion sy solosaina:
Mac Pro nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2009 miaraka amin'ny karatra AirPort Extreme sy modely nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2010 sy aoriana.
Raha ianao Ny iPhone dia tantanin'ny iOS 8 na aoriana ary ny Mac anao dia tantanin'ny OS X 10.0 Yosemite na aoriana, afaka mizara votoaty eo amin'ny iPhone, iPad, iPod touch, Mac, ary ny mifamadika amin'izany ianao eo amin'ireto fitaovana manaraka ireto:
iPhone: iPhone 5 sy aoriana
iPad: iPad taranaka faha-4 sy aoriana
iPad Pro: iPad Pro taranaka voalohany sy aoriana
iPad Mini: iPad Mini taranaka voalohany sy aoriana
iPod Touch: iPod Touch taranaka faha-5 sy aoriana
MacBook Air tapaky ny taona 2012 ary vao haingana
MacBook Pro nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2012 sy aoriana
iMacs nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2012 sy aoriana
Mac Mini nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2012 sy aoriana
Mac Pro nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2013 sy aoriana
Aiza no misy rakitra zaraina amin'ny AirDrop
Miankina amin'ny endrik'ireo rakitra izay azontsika amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch, ireo dia hotehirizina amin'ny fampiharana iray na hafa:
Sary sy horonan-tsary: Raha mahazo sary sy horonan-tsary voarakitra amin'ny iPhone isika dia ho voatahiry ho azy ao amin'ny fampiharana Photos.
horonan-tsary: Raha horonan-tsary amin'ny endrika tsy mifanaraka amin'ny iOS, dia tsy ho fantatry ny iOS ilay endrika ary hanontany anay ny fampiharana tiana hanokatra azy.
firaketana an-tsoratra: Rehefa tsy afaka mampifandray ny fanitarana rakitra amin'ny rindranasa teratany ny iOS, dia hampiseho antsika ny lisitry ny rindranasa hitahirizana ilay rakitra hanokafana azy any aoriana.
Rohy amin'ny Internet: Raha mizara rohin-tranonkala isika dia hanokatra ho azy ny rohy miaraka amin'ny navigateur default napetrakay amin'ny fitaovanay ny iOS.
Raha mizara rakitra isika avy amin'ny iPhone mankany amin'ny Mac na eo anelanelan'ny Mac, ny solosaina dia hanao hetsika iray na hafa arakaraka ny karazana rakitra zaraina.
firaketana an-tsoratra. Na inona na inona karazana rakitra, macOS dia hitahiry ilay rakitra mivantana ao amin'ny lahatahiry Downloads. Tsy maninona na sary, horonan-tsary, antontan-taratasy an-tsoratra...
Rohy amin'ny Internet. Raha mikasika ny rohy an-tranonkala, macOS dia hanokatra ho azy ny rohy ao amin'ny navigateur default an'ny solosainao.
Inona no karazana rakitra azo alefa amin'ny AirDrop
AirDrop dia mamela antsika mizara izay endrika rakitra eo anelanelan'ny fitaovana tantanin'ny iOS, iPadOS ary macOS. Tsy maninona raha tsy manana fampiharana mifanaraka amin'ny fanokafana azy ny solosaina alehany.
Apple dia nilaza fa tsy misy fetran'ny habaka ambony indrindra amin'ny rakitra iray handefa izany amin'ny alàlan'ny AirDrop. Na izany aza, raha lehibe loatra ny habeny, dia azo inoana fa hatory ny fitaovana iOS ary ho faty ny efijery.
Raha mitranga izany, ho tapaka ny famindrana. Ny fampiasana AirDrop handefasana rakitra video lehibe dia tsy soso-kevitra. Amin'ireo tranga ireo dia tsara kokoa ny mampiasa ny iray amin'ireo safidy asehoy anao amin'ny lahatsoratra hafa nampianarinay hamindra sary avy amin'ny iphone ho mac.
Ahoana ny fametrahana AirDrop amin'ny iPhone
To configure izay ahafahan'ny olona mandefa rakitra ho antsika Amin'ny alàlan'ny protocol AirDrop amin'ny iPhone, tsy maintsy manaraka ny dingana izay nolazaiko etsy ambany isika:
dia tsindrio ary mihazona ny AirDrop.
Ahoana ny fametrahana AirDrop amin'ny Mac
Mba configure izay azon'ny olona atao alefaso aminay ny rakitra amin'ny alàlan'ny protocol AirDrop amin'ny Mac, tokony hanaraka ireo dingana izay hasiako tsipiriany etsy ambany:
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia asehoy ny kisary AirDrop eo amin'ny bara menu ambony. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manao ny dingana izay hasehoko anao eto ambany isika:
Miditra isika Taratasy rafitra.
Ao anatin'ny System Preferences, tsindrio ny Dock sy menu bar.
Manaraka, eo amin'ny tsanganana ankavia, kitiho ny AirDrop.
Eo amin'ny tsanganana havanana, jereo ny boaty Asehoy amin'ny bara menu.
Mba hampavitrika ny AirDrop sy fetra izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa rakitra ho antsika, kitiho ny kisary ao amin'ny bara sakafo ary:
Esorinay ny switch hanaisotra ny AirDrop.
Misafidy izahay Fifandraisana irery ihany o rehetra.
Alternatives amin'ny AirDrop ho an'ny Windows
Araka ny nolazaiko tany am-piandohan'ity lahatsoratra ity, ny protocol AirDrop ho an'ny paoma manokana izy io, ka tsy hita amin'ny sehatra hafa.
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny AirDrop ho an'ny Windows ary izany, ho fanampin'izany, dia azo alaina ho an'ny Android ihany koa, dia AirDroid, fampiharana maimaim-poana izay miasa amin'ny alàlan'ny navigateur web ary misy fampiharana ho an'ny Windows.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Inona no atao hoe AirDrop ary ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'izany
Apple Stores sy mpanamboatra nahazo alalana dia tsy hanamboatra iPhone nangalarina